आगलागीबाट ५० लाखको क्षति !! – Nepal
आइतवार, मार्च 24, 2019
वर्गहरु वर्ग छान्नुहोस अर्थ (20) खेलकुद (4) गृहपृष्ठ (78) ग्लोबल (14) जीवनशैली (4) मनोरञ्जन (8) राजनीति (11) समसामयिक (5) साहित्य (1)
आगलागीबाट ५० लाखको क्षति !!
मार्च 23, 2018 admin	Comment(0)
ताप्लेजुङ – ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङको हेलिप्याड स्थित प्रवेशद्धारसँगै जोडिएको होटल ईको भ्यू प्वाइन्टको माथिल्लो तला शुक्रबार एकाबिहानै जलेर नष्ट हुँदा ५० लाख बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्याङक प्रहरीले संकलन गरेको छ। होटलको मुख्य कक्ष सहित माथिल्लो भाग पूरै जलेर नष्ट भएकोले क्षति बढी देखिएको प्रहरीले बताएको छ।
होटल व्यवसायी रमेश गुरुङका अनुसार आगलागीले रेष्टुरेन्टमा रहेका बिभिन्न प्रकृतिका पेय पर्दाथ र खानपिनका लागि प्रयोग हुने सामाग्री सहित फर्निचर लगायतका सामाग्री जलेर नष्ट भएको छ। आगलागी आकस्मिक तवरले लागेकोले कुनैपनि सामाग्री बाहिर निकाल्न नपाएको भन्दै व्यवसायी गुरुङले होटल तथा रेष्टुरेन्टको मुख्य भागनै जलेको जानकारी दिए।
बिद्युत सर्ट भई आगलागी सुरु भएको स्थानीयको अनुमान छ। आगो लाग्ने बित्तिकै पुगेको फुङलिङ नगरपालिकाको दमकलले पहिलो पटक सञ्चित पानीको प्रयोग गर्दा आगो नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि तोक्मेडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको पोखरीबाट पानी ल्याएको थियो। आगो लाग्ने बित्तिकै स्थानीय बासिन्दाका साथ नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेका थिए। यो पूरै जनशक्तिले स्थानीय पानीको स्रोतको अधिकत्म उपयोग तथा दमकलको पानी समेत प्रयोग भएपछि आगो त्यो भन्दा नियन्त्रण बाहिर जान पाएन।
बारम्बार आगलागिका घटनाले थलिएको ताप्लेजुङको फुङलिङ क्षेत्रमा माघ देखि यता मात्र भएका घटनाबाट करौंडोको क्षति भइसकेको छ। आगलागीकै कारण पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाको डुम्रिसेमा १ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने आगलागीले हुने नोक्सानी थपिदै गएको छ। कमसल प्रकृतिका बिद्युतीय उपकरणको प्रयोग र आगोलाई गर्ने हेलचेक्र्याईका कारण आगलागीका घटना बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्।
आमाले डस्टबिनमा फालेको बच्चाको शिशिर भण्डारीले जिम्मा लिए ! सबैले हेरौं र शेयर गरौ
फ्रेवुअरी 25, 2019 admin
आमाले डस्टबिनमा फालेको बच्चाको शिशिर भण्डारीले जिम्मा लिए ! सबैले हेरौं र शेयर गरौ काठमाडौं -केहि समयअघि पशुपति क्षेत्रमा राखिएको फोहोरको डंगुरमा एउटा बच्चा भेटिए । छिनमै खबर फैलियो। त्यसको सुइँको ‘नेपाल स्नेही काख’ नामक संस्थाले पनि पायो। र, बच्चाको अवस्था बुझ्न संस्थाको टोली पशुपति पुग्यो। डस्टबिनमा भेटिएको बालक करिब २० दिनका जस्ता देखिन्थे। ‘शरीर […]
३० वर्षीय राजेशको शव वेबारिसे अवस्थामा फेला, हत्या आरोपमा मृतकका भाइ र भिनाजु पक्राउ
मे 13, 2018 admin
धनकुटा – स्थानीय फोहर विसर्जनस्थल छेउमा आज बिहान बेवारिसे अवस्थामा एक युवकको शव फेला परेको छ । शव धनकुटा नगरपालिका ६ का ३० वर्षीय राजेश श्रेष्ठ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय धनकुटाका प्रहरी निरीक्षक अञ्जन कोइरालाले बताउनुभयो । श्रेष्ठको अनुहार र शरीरमा गम्भीर चोट रहेका कारण हत्या भएको आशंकामा धनकुटा नगरपालिका–६ निवासी मृतकका भाइ ईश्वर, भिनाजु […]
अप्रील 2, 2018 admin
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भूकम्प, बाढीपीडितलाई १ लाख थप राहत दिने र वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउन गरेको निर्णयमा विवाद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेवसाइटमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भनिएको भूकम्प र बाढीपीडितलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णय’bout उल्लेख गरिएको छैन। कार्यालयले फागुन १६ गते माघ महिनामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय आफ्नो […]
पानीजहाज चलाउने प्रधानमन्त्रीको दृढता !!
सेनाको परीक्षामा सहभागी १२ नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ !!